Haweeney Balaayiin Doolar ka Dhacday Dunida oo Dhan, oo Mar Qura La Waayay | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Xagjirayn ‘Radicalization’: – Yaa Xagjir ah, Maxaa Keenna Xagjirnimada?
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, March 23, 2019
Anatomy iyo Fiisiologiska? Qeybta 1aad
Ilhaan Ciise Maxamed, August 2, 2019
Tuke Somalism — November 27, 2019
Waxay dadweynihii u sacbinayay u sheegtay in barnaamijdeeda OneCoin uu ahaa mid ay dooneysay inuu noqdo barnaamijka ugu weyn caalamka ee lacagta lagu labanlaabo, “qof walbana lacagtiisa lagu siinayo meel kasta oo uu joogo”.
Bitcoin wuxuu ahaa barnaamijkii ugu horreeyay ee lacagaha lagu badiyo, walina waa kan ugu weyn ee la garanayo – qiimihiisu wuxuu kasoo billowday lacag aad u yar, ka dibna wuxuu gaaray boqollaal doolar sanadkii 2016-kii. Lacagahaas waxaa si toos ah loo siinayay dadka ka qeyb qaata ama lacagahooda ku shubta.
Cryptocurrency wuxuu sidoo kale ku dhisnaa fikrad si guud ula xiriirta lacagtaada oo kuu badaneysa, dad badan ayaana u dagdagay inay ka faa’iideystaan fursaddaas cusub.
Dr Ruja waxay dadkii dhageysanayay u sheegtay in barnaamijkeeda OneCoin uu yahay “kii looga takhalusi lahaa Bitcoin”. “Muddo labo sano gudahood ah, ma jiri doono qof ka hadlaya ama lacag ku shuban doona Bitcoin!”, ayey tiri iyadoo kor u qeylineysay.
Guud ahaan dadka ku nool daafaha caalamka waxay billaabeen inay maalgashadaan ama lacagahooda ku keydsadaan OneCoin, iyagoo rajeynayay inay qeyb ka noqdaan ol’olahan cusub ee lagu badinayo lacagaha. Warqado ay BBC-da heshay ayaa muujiyay in dadka ku nool Britain ay barnaamijkaas ku dareen lacag kor u dhaafeysa 30 milyan oo doolar, lixdii bilood ee ugu horreysay.
Waddamada ugu badan ee shacabkoodu ay lacagta galiyeen barnaamijkan waxaa ka mid ah Shiinaha, Jarmalka, UK, Mareykanka iyo Hong Kong. Laakiin waxaa jirtay arrin muhiim ah oo aysan ka warqabin dadkan maalgashadayaasha ah. Taasoo ah in aysan marnaba ka fikirin qaabka uu barnaamijkan u shaqeynayo iyo sida lagu aamini karo.
Laakiin waxaa jiray wax khaldan. Horaantii bishii October ee sanadkii 2016-kii – oo ahayd 4 bilood ka dib markii ay Dr Ruja kasoo muuqatay London – khabiir ku takhasusay lacagaha keydinta looga ganacsado, oo lagu magacaabo Bjorn Bjercke ayaa laga soo wacay shirkad shaqaale raadieneysay.
“Waxaan ku fikirayay: ‘Sidey noqon doontaa shaqadeydu? Maxay tahay howsha aan u qabanayo shiraddan?”, ayuu yiri isagoo dib u xasuusanaya sheekadaas.
“Ninkii isoo wacay wuxuu ii sheegay inay rabaan qof khabiir ku ah lacagaha keydinta looga ganacsado. Markaasna aysan heysanin khabiir noocaas ah’.
“Anigana waxaan ku iri: ‘Maxaa tiri? Waxaad ii sheegtay in shirkaddu ay tahay mid ka shaqeysa lacagaha keydinta looga ganacsado, sidey ku dhacday inaydaan khabiir lahayn”.
“Magaceed shirkaddan”, ayuu yiri Bjercke, oo su’aal weydiinaya wakiilka.
“Waa shirkadda OneCoin.”
Riyadii ‘taajirnimada’ ee Jen McAdam
Maalin maalmaha ka mid ah, Jen McAdam ayaa qof ay saaxiib ahaayeen ka heshay farriin loogu sheegayo shirkaddan cusub ee fursadda weyn ay ku jirto, isla markiina waxay eegtay bogga ay ku leeyihiin internet-ka. Muddo saacad ah ayey dhageysaneysay macluumaadka ku jiray halkaas, waxaana loo sharraxay fursad ‘taajirnimo ah’ oo ku jirtay barnaamijkaas.
Waxaa faahfaahin laga siiyay taariikhda Dr Ruja, oo ah haweeneyda soo hindistay barnaamijkaas. Arrimahaas oo dhan ayaa soo jiitay McAdam, waxayna dareentay farxad, iyadoo rajeyneysay inay ka faa’iideysan doonto.
Waxay go’aansatay inay ku maalgashato lacag dhan €1,000. Hal isbuuc ka dib, McAdam waxay ku shubatay lacag lagu noqonayo “taajir” oo ah €5,000, sida ku xusneyd macluumaadka barnaamijka.
Waxay Online-ka ka daawaneysay faa’iidada lacagteeda oo sare u kacday, oo dhaaftay ilaa £100,000 – waana toban jibaarka intii ay iyadu shakhsi ahaan ugu shubatay.
Daniel wuxuu ka mid ahaa kumannaan reer Uganda ah oo lacagahooda ku waayay barnaamijka khiyaanada ah ee ay sameysay Dr Ruja
Dr Ruja waxay wali ku safreysay caalamka, si ay u fidiso barnaamijkeeda. Meelo badan ayey tagtay, dad badan ayeyna ka dhaadhicisay inay ku biiraan oo ay maalgashadaan barnaamijkeeda. Laakiin ugu dambeyntii, sanadkii 2017-kii, mar qura ayaa la waayay Dr Ruja, mana jirin qof markaas sharrixi karay halka ay aadday.
Dad badan ayaa isku dayay inay xasuustaan, balse meelna way ku sheegi waayeen. Ma laga yaabaa inaan u dhawaannay? Suurtagal ma tahay inay isku qarineyso bartamaha Yurub?, ma garaneyno. Magaalada Frankfurt dabcan ma aha meesha kaliya ee ay aadi karto – laakiin way ka mid tahay meelaha ay ku dhuuman karto, balse waxaa kale oo laga yaabaa inay tagto meelo kale oo ay ka mid yihiin Ruushka iyo xitaa Dubai.
“Waxaa laga yaabaa inay ogtahay inaan raadineyno, oo iyaduna ay annaga nagu qosleyso”, ayuu yiri qofka nala soo xiriiray.
Raad-raaca qoraalka: Bbc Somali
Tags: Haweeney Balaayiin Doolar ka Dhacday Dunida oo Dhanoo Mar Qura La Waayay
Next post Aanadii Negeeye - Qeybtii 1aad
Previous post Waa Kaswaannadii Nolosha Raadka ku Reebay